Xildhibaanka waa runtii,yaad bogaadinaysaan
Xildhibaanka waa runtii,yaad bogaadinaysaan
Xildhibaanka waa runtii,yaad bogaadinaysaan Xildhibaan Dheeg waa Raggii hore,waa Raggi Hilib Geella cuni jirey,waxaad ku garanaysaa,wuxuu yidhi "waar Ninka Cadka qaatay ha bogaadinina ee Ninka
Xildhibaan Dheeg waa Raggii hore,waa Raggi Hilib Geella cuni jirey,waxaad ku garanaysaa,wuxuu yidhi "waar Ninka Cadka qaatay ha bogaadinina ee Ninka hanneeyey wanaagiisa afka haka dhigina" Abwaanka waxaan kaloo dhegeystey isagoo jooga meel aan weli laga maqal 'Aakhiro Nin aan Geel lahayn lama ammaaneyn' iyo Nayroobi oo uu hadana madaxa saartey (marba meelbay joogtaaye) dhacanta Daa'uud.
Dr C/raxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro),Murashaxa Xisbiga Waddani wuxuu inoo soo gaabiyey hawl dhib badnaanlahayd oo khatar badnayd,wixii taageerayaal maal,muruq iyo maskaxba la garab taagnaa,way adkayd wixii oo tacab ahaa,wixii filasho iyo guul u joog ahaa inuu go'aan adag ku qaato isagoo dadkiisa iyo Qarankiisa abaal gashanaya.Dhamaanteen aynu Bogaadino oo uga mahadnaqno tudhaalihiisa.
Waxaynu isagana Bogaadinaynaa Mudane Faysal Cali Waraabe oo isaguna,inkastoo aynu isi siinay markiiba ogolaaday natiijadii,markasta oo ay soo gaadho yaa maali jirayeey isagaa ugu horeeya.
Waxaynu u ducaynaynaa Madaxda la doortay,Madaxweyne Biixi iyo Madaxweyne ku xigeen Saylici in ilaahay u iftiimiyo Aragtida,Xikmadna siiyo ay naftooda iyo tan dadkooda ay ku hogaamiyaan,in Illaahay siiyo Garasho wanaagsan oo go'aanada u fududeeya,in Illaahay siiyo Dulqaad,Samir,Akhlaaq iyo Daacadnimo ay dadkooda ku hagaan inIllahay siiyo Xirfad ay dadkooda ku kasbadaan.Aamiin yaa Xakiim,Ar Raashid,An Nuur,Al Muqsit,Al Waliy,As Sabir,Al Majiid,Al Wajiid,Al Wakiil,Al Xakiim,Al Risaaq.
Madaxweynaha la doortay wuxuu ku dhaqaaqay waddo yididiilo leh,marba hadii uu durtaba ka qaybgalay Afar madalood oo muhiim ahaa If iyo aakhiroba.Waxay ahaayeen Laba Aas oo uu ka duceeyey iyo Laba ardaa oo uu ka mahad naqay. Talada Madaxweynaha cusub waa lagu badiyey,yeelkeede ,Madaxweyne sidii Cigaal ha u hadal caddaan,sidii Siilaanyana ha u macaanaan.Muusahaaga ahow.
Ugu dambayntii waxaynu u mahadnaqaynaa Madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo Xukuumaddiisii,waxaynu Alle uga baryeynaa Madaxweynaha iyo Marwadiisaba inta Noloshooda ka hadhay inay Sharaf ku noolaadaan ,Aakhira Ehlu Janada ka mid noqdaan.